‘सुरक्षाका लागि कस्तो हेलमेट लगाउने भन्ने जनचेतना जगाउन आवश्यक छ’ - samayapost.com
‘सुरक्षाका लागि कस्तो हेलमेट लगाउने भन्ने जनचेतना जगाउन आवश्यक छ’
समयपोष्ट २०७६ पुष ६ गते १६:३९
सत्यदीप इन्टरनेसनल नेपालमा विभिन्न ब्रान्डका अटो पाट्र्स बिक्री–वितरण गर्ने प्रतिष्ठित कम्पनी हो । सुरुवातमा चार पाङ्ग्रे बस–ट्रक सेग्मेन्टमा केन्द्रित यो कम्पनी पछिल्लो तीन वर्षदेखि भारतीय चर्चित ब्रान्डहरुको एजेन्सी लिएर मोटरसाइकलको स्पेयर पाट्र्समा केन्द्रित हुँदै आएको छ । सत्यदीप इन्टरनेसनल हालै मात्र भारतीय सन्धार एमकिनले उत्पादन गरेको मेभोक्स हेलमेटको नेपालको लागि आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त भएको छ । भर्खर मात्र नेपाली बजारमा भित्रिएको मेभोक्स हेलमेटको अवस्था, यसका विशेषता र आगामी बजार रणनीतिबारे सत्यदीप इन्टरनेसनलका म्यानेजिङ डाइरेक्टर दीपेन्द्र मिश्रसँग समयबोधले गरेको कुराकानीः
नेपाली बजारमा मेभक्स हेलमेटको बिक्री–वितरण थाल्नुभएको छ, यसको अवस्था कस्तो छ ?
भारतीय कम्पनी सन्धार एमकिनको उत्पादन मेभोक्स हेलमेट हामीले नेपाली बजारमा बिक्री–वितरण गरिरहेका छौँ । २०१९ को अप्रिलदेखि नै भारतीय बजारमा आएको यो हेलमेट नेपाली बजारमा आएको चार–पाँच महिनामै हामी एकदम उत्साहित भएका छौँ । राम्रो क्वालिटी भएर होला, ग्राहकहरूले एकदम मन पराइरहनुभएको छ । व्यवसायको कुरा मात्र नभएर यसमा सुरक्षा पनि जोडिन्छ । यसको आफ्नै परीक्षण ल्याब छ । हाम्रा जति पनि प्रडक्टहरू छन्, सबै आईएसआई अर्थात् इन्डियन स्टान्याडर्ड, ईसीई अर्थात् युरोपियन स्ट्यान्डर्ड र डीओटी अर्थात् अमेरिकन स्टान्याडर्ड परीक्षण गर्न सकिन्छ । अहिले नेपाली बजारमा करिब ७० प्रतिशतजति हेलमेटहरू आईएसआई सर्टिफाइड छैनन् । हेलमेट सुरक्षासँग जोडिने भएकाले पनि हेलमेटबारे जनचेतना जगाउन जरुरी छ ।
भारतमा अटो मोबाइलको दुईवटा ठूला ग्रुप सन्धार जो अटो ह्विलरमा आठ हजार करोडको कम्पनी हो भने एमकिन सात–आठ सय करोडको कम्पनी हो । सन्धारले इग्निसन स्विच, मिररदेखि लिएर जति पनि ओई गाडीहरू आउँछन्, उनीहरूको बाईसवटा प्लान्टहरूबाट बन्ने गाडीहरूमा सप्लाई छ । त्यस्तै, एमकिन मोटरसाइकल, जेसीभीको ठूला सिट, हुट, क्याबिन बनाउने कम्पनी हो । दुई कम्पनीको जोइन्ट भेन्चरमा यो प्लान्ट लगाएको हो । अहिले उहाँहरूको क्षमता बीस लाख हेलमेटको हो, जुन पाइलट फ्याक्ट्री हो । भर्खरै भारतका धेरै प्रान्तहरूमा हेलमेट अनिवार्य गरिएको छ, जसले गर्दा हेलमेटको माग धेरै छ । मानिसहरू पनि हेलमेट लगाउनुपर्छ भनेर सचेत भइरहेका छन् । त्यस कारण भारतमा राम्रो सेटअप छ । मेभोक्स हेलमेटको भारतपछिको बजार नेपाल नै हो । नेपालमा पनि हामी विभिन्न रणनीति बनाएर हेलमेट बजारमा प्रवेश गरेका छौँ, सुरुवातमै हामी उत्साहित छौँ ।
यो हेलमेटका विशेषताहरू के–के छन् ?
यो हेलमेट परीक्षणको जुन आईएसआई मेथड छ, त्यो परीक्षण भएको नेपालमा पाँच–छवटा हेलमेट मात्र छ । बाँकी बाह्र–पन्ध्रवटाको कुनै परीक्षण हुँदैन । सीधै बनाएर ट्राफिकलाई छल्ने उपायले मात्र हेलमेट आउँछ । हामीले लञ्च गरेका चार–पाँचथरीका हेलमेट जुन छन्, ती आईएसआई अप्रुभ हुन् । हामीले वितरण गर्ने हेलमेट पूर्ण सुरक्षित छन् । अर्को, आजका युवाहरूको रोजाइमा पर्ने स्टाइलिस, ग्राफिक्स कलर सबै किसिमका हेलमेट हामीसँग छन् ।
नेपाली बजारमा कसरी जाँदै हुनुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले ग्राहकहरूलाई कुन हेलमेट कति सुरक्षित भनेर जनचेतना जगाउने काम गर्छौं । सबैभन्दा पहिले मानिसमा सुरक्षाका लागि कस्तोखालको हेलमेट लगाउने भनेर सचेत हुनुप¥यो । नेपालभर हामी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम सुरु गर्छौं । ग्राहकहरूलाई कस्तोखालको हेलिमेट लगाउने र सुरक्षित हुने भन्ने कुरा बुझाउने हाम्रो कोसिस हुनेछ ।
नेपालको बिक्री–वितरणबाट कत्तिको उत्साहित हुनुहुन्छ ?
यो चार–पाँच महिनाको अवधिमा निकै नै राम्रो रेस्पोन्स पाएका छौँ । धेरैले मन पराएका छन् । ठूलो परिमाणमा पुगेको छैन तर देशभर सामान पुगिसकेको छ । हाम्रा केही प्राविधिक पाटोहरू मूल्यमा पनि छन् । यहाँ कम्पिटिटर प्रडक्टहरू छन् । हाम्रो इन्ट्री लेबलको प्रडक्ट आएपछि मूल्य पनि मिल्दै जान्छ । चार–पाँच महिनापछि हामीले अरू चार–पाँच प्रकारका हेलमेटहरू ल्याउँदै छौँ । जाँडो र गर्मीमा लगाउने सबै प्रकारका हेलमेटहरू आउँदैछन् ।
अहिले नेपालमा कति मूल्य पर्ने हेलमेटहरू छन्, इन्ट्री लेबलको मूल्य कति हुन्छ ?
इन्ट्री लेबलमा अठार सय, दुई हजारजति हुन्छ । अहिले हामीसँग पैँतीस सयदेखि पैँतालीस सयसम्मका हेलमेट छन् । ओएक्स ११ को डबल भाइजर, डिट्याचेबलवाला हेलमेटको मूल्य ३ हजार ८ सय ४१ रूपैयाँ, ओएक्स ११. डी ३ को डीभी ग्राफिक्सवाला हेलमेटको ४ हजार १ सय ७७, ओएक्स १० एसभीको २ हजार ६ सय ५२, ओएक्स १०. डी १ हाफ ग्राफिक्स हेलमेटको ३ हजार २ सय ६३ रूपैयाँ, ओएक्स १०. डी २ एसभी प्रिमियमको ३ हजार ४ सय १२ रूपैयाँ पर्छ । त्यस्तै, फुलफेसमा एफएक्स ३० म्याक्सको ४ हजार ७ सय ४५, एफएक्स ३० म्याक्स ग्राफिक्स हेलमेटको ५ हजार १ सय २८, एफएक्स २१ को सिङ्गल भाइजर हेलमेटको ३ हजार ३ सय १०, एफएक्स २१ ग्राफिक्सको ३ हजार ९ सय ८०, एफएक्स २२ को डबल भाइजर हेलमेटको ३ हजार ९ सय ४२ र एफएक्स २२ ग्राफिक्सको मूल्य ४ हजार ५ सय ५५ रूपैयाँ पर्छ ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी रुचाउने कस्तो रेञ्जको हेलमेट हो ?
काठमाडौँमा धेरै धूलो भएको हुनाले बीसदेखि पैँतीससम्मको उमेर समूहले फुलफेस हेलमेट मन पराउँछन् । मानिसहरूले ग्राफिक्स डिजाइन र मोटरसाइकलको कलरअनुसार पनि हेलमेट रोज्छन् । गर्मी ज्यादा हुने स्थानमा ओपन फेस हेलमेट बढी रुचाइन्छन् ।
मेभोक्स हेलमेटमा वारेन्टी, ग्यारेन्टी के छ ?
हामीले तीन वर्षको रङको ग्यारेन्टी दिएका छौँ । हेलमेटभित्र प्रयोग भएका कपडा नचिलाउने, धुन मिल्ने अप्सन पनि छ ।
शशिला मोटर्सको नयाँ सेवा : गाडी खरिद विक्री अब अनलाईनबाटै
बढ्दै निजी सवारीप्रतिको आकर्षण
टोयोटाद्वारा चालु वर्षमा ६४.१ प्रतिशत नाफा घट्ने प्रक्षेपण
नेपालमै पहिलो पटक दराजबाट सार्वजनिक भयो अपाचे RTR 160 4V सिंगल डिस्क
अन्तराष्ट्रिय उडान तालिका सार्वजनिक